1. Sava lalana
2. POLITIKA FITIAVANA
3. FIVORIANA NY FANDAHARAN'I PAOLY
4. NAMPIASA NY FIFANARAHANA AMPY AMIN'IZANY
1. Fampandrenesana fifanekena iray
2. Fankatoavana ny adidy ara-dalàna
3. Mba hiarovana ny tombontsoa ara-drariny
4. Ho an'ny tetikasa anatiny sy ny fitazonana firaketana
5. Ho fampandrenesana ara-dalàna
6. For Marketing Purpose
7. Mba hanampiana antsika amin'ny fanatsarana ny vokatra sy ny tolotra
5. Famaritana ny fampahalalam-baovao
6. Miantehitra amin'ny DATA PROCESS
7. AHOANA NO TOKONY HAHATONGA ANAO AO ANATINY
8. NY ZAVA-TSOAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
9. TSY MISY MAHASOA ANTSIKA
10. FAMPANDROSOANA MANDRAKIZAY
11. AHOANA NO TOKONY HAHATAKATRA NY INFORMATION
12. POLITIKA KOA
Central Clearing Ltd (eto ny "Company" na "izahay" na "FXCC" na "izahay"). Ity Politika ity dia manazava ny fomba fanangonana FXCC ny fampiasana sy ny fitantanana ny mombamomba ny olona avy amin'ny mpanjifa mavitrika sy ny mpanjifa mety. FXCC dia manolo-tena hiaro ny fiainanao manokana. Amin'ny fanokafana kaonty ara-barotra miaraka amin'ny FXCC dia manome alàlana ny fanangonana, fanodinana, fitehirizana ary fampiasana ny mombamomba ny FXCC ny mpanjifa araka izay nohazavaina etsy ambany.
Ny politikan'ny orinasa hanaja ny tsiambaratelo ny vaovao sy ny tsiambaratelon'ny tsirairay.
Ity politikan'ny Privacy ity dia mikendry hanome anao fampahalalana momba ny fomba fanangonantsika sy ny fanaraha-maso ny angon-drakitrao manokana, anisan'izany ny angona azo ampiasaina amin'ny alalan'ny tranonkalanay rehefa miditra amin'ny tranokalanay ianao.
Zava-dehibe ny famakinao ity Politika momba ny fiainana an-tsoratra miaraka amin'ny fampahafantarana manokana momba ny tsiambaratelo ity na ny fampahafantarana momba ny asa an-tsoratra izay azontsika omena amin'ny fotoana manokana rehefa manangona na manitsy ny angon-drakitra momba anao ianao mba hahafantaranao tsara ny fomba sy ny antony ampiasanay ny angon-drakitrao . Ity politika ity dia manampy ireo politika hafa ary tsy natao hanodina azy ireo.
Ao amin'ny FXCC dia takatsika ny maha-zava-dehibe ny fitazonana ny tsiambaratelo ny mombamomba ny mpanjifany ary manolo-tena hiantohana ny fiarovana ny vaovao omen'ny mpanjifantsika amin'ny alalan'ity tranonkala ity.
FXCC ny Fitsipika momba ny fiainana an-tserasera dia haverina indraindray mba handinihana ny lalàna vaovao sy ny teknolojia, ny fiovan'ny asa sy ny fomba fanao ary mba hahazoana antoka fa mbola mifanaraka amin'ny tontolo iainana miova. Ny fampahalalana rehetra azontsika dia hifehezan'ny fitsipi-pifanaraham-barotra manan-danja indrindra. Ny Politika Fiarovana Privacy dia havitrika ao amin'ny tranonkala FXCC. Amin'izany, ireo mpividy dia manaiky ny hanaiky ny famoahana ny Politika tsy miovaova amin'ny endriny elektronika ao amin'ny tranokala ho toy ny filazana marina momba ny FXCC amin'ny mpanjifany. Raha misy ny fanovana natao dia manan-danja tokoa dia hampahafantarintsika amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alalan'ny fampahafantarana ao amin'ny pejy fandraisana. Ny fifandirana momba ny fitsipika mifehy ny FXCC dia mifototra amin'io taratasy io sy ny fifanarahana amin'ny client. Ny FXCC dia mandrisika ny mpanjifany handinika tsaratsara kokoa ity Politika tsy miankina ity amin'ny fomba mahazatra, mba hahafahan'izy ireo mahafantatra hatrany ny zavatra ilain'ny FXCC, ny fomba ampiasana izany ary izay mety hampahafantarana azy, araka ny fepetra voalazan'ity politika ity.
Mba hanomezana vokatra ara-bola sy tolotra ara-bola ho an'ny mpanjifantsika amin'ny fomba mahomby sy marina, rehefa mihatra amin'ny rejisitra mba hampiasa iray na maromaro amin'ny serivisinay dia hangataka anao ny mombamomba anao manokana. Ny FXCC dia mihazona ny zo sy ny adidy noho ny asan'ny orinasa, mba hanamarinana ny fahamarinan'ny angon-drakitra voatahiry ao amin'ny tahiry, amin'ny fangatahana anao indraindray ny angon-drakitra nomena na ny fanamafisana ny fahamarinan'ilay voalaza etsy ambony.
Ny karazana fampahalalana manokana azontsika dia mety hahitana (fa tsy voafetra ihany):
Ny anaran'ny mpividy rehetra.
Adiresy an-trano sy adiresy.
Trano sy miasa amin'ny finday.
Fandefasana nomerao / na laharana ID.
Ny governemanta dia namoaka ID miaraka amin'ny sonia.
Fampahalalana momba ny sata sy ny fidiram-bola
Fampahalalana momba ny traikefa ara-barotra teo aloha sy ny fandeferana mety.
Fampahalalana momba ny fanabeazana sy ny asa
Tombam-bola amin'ny hetra sy ny mari-petra amin'ny hetra.
Ny Data ara-bola dia misy [kaonty amin'ny banky sy ny antsipirian'ny karatra].
Ny Data Transaction dia ahitana [antsipiriany momba ny fandoavam-bola ho anao sy avy aminao].
Ny Data Technique dia ahitana ny adiresy Internet Protocol (IP), ny angon-drakitra misy anao, ny karazana navigateur sy ny version, ny fikandrana ny fotoana sy ny toerana, ny plug-in karazana sy ny dikan-teny, ny rafitra fiasa sy ny sehatra ary ny teknôlôjia hafa amin'ny fitaovana ampiasainao hiditra amin'io tranonkala io. ].
Ny Data Data dia misy [ny anaranao sy ny tenimiafinao, ny fividianana na ny baikon-tsakafo nataonao, ny tombontsoanao, ny safidinao, ny valiny ary ny valiny].
Ny Data Usage dia ahitana [fampahalalana momba ny fomba fampiasanao ny tranokalanay, vokatra ary tolotra].
Ny Marketing sy ny Data Communications dia ahitanao [ny safidinao amin'ny fandraisana marketing avy amintsika sy ny antoko fahatelo ary ny safidin'ny fifandraisana].
Manangona, mampiasa sy mizara angon-drakitra toy ny angona statistika na demografika izahay na inona na inona tanjona. Ny angon-drakitra azo alaina dia azo avy amin'ny tahirin-tenanao manokana saingy tsy heverina ho antonony manokana ao anaty lalàna satria ity angon-drakitra ity dia tsy manambara mivantana na tsia ny mombamomba anao. Ohatra, mety hanangona ny fampiasana ny data ianao mba hamaritana ny isan-jaton'ny mpampiasa ateraky ny karazana tranonkala iray. Na izany aza, raha mampifandray na mampifandray ireo angon-drakitra miaraka amin'ny angon-drakitra manokana ianareo mba ahafahany mamantatra mivantana na tsy mivantana anao, dia arahinay ny angon-drakitra mifandraika amin'izany ho fampiasa manokana izay hampiasaina mifanaraka amin'io filazam-baovao momba ny fiainana manokana io.
Tsy manangona sokajy manokana momba ny mombamomba anao manokana ianao (izany dia ahitana antsipirihany momba ny hazakazaka na foko, finoana na filozofika, ny fiainana an-tsokosoko, ny fironana ara-pananahana, ny politika politika, ny mpikambana sendikà, ny vaovao momba ny fahasalamanao sy ny angatra momba ny fahasalamana sy biometrika) .
Azontsika atao ihany koa ny manangona fampahalalana sasantsasany mikasika ny fampiasana ny tolotra ataontsika. Izany dia mety ahitana fampahalalana izay ahafantarana anao sy / na ny orinasa aminao, toy ny fotoana ifanakalozanao, ny fampiasanao ny serivisy, ny karazana data, ny rafitra sy ny tatitra azonao atolotra, ny toerana misy anao, faharetan'ny fotoam-pivoriana sy ireo angona mitovy amin'izany. Ny angona nangonina dia azo ekena ihany koa avy amin'ny olon-kafa, toy ny manam-pahefana, orinasa izay nampiditra anao ao amin'ny FXCC, orinasa mpanodina karatra, ary koa loharanom-pampindram-baingam-bahoaka izay avelanay halefa ara-dalàna.
Ny fifandraisana elektronika sy / na fifandraisana an-telefaona miaraka aminay dia voarakitra ary io no fananana rehetra an'ny FXCC ary manaporofo ny fifandraisana misy eo amintsika.
Manana safidy ianao mba hanomezana anao na ny fampahalalana manokana rehetra ilaina. Na izany aza, ny fampahalalana tsy ampoizina dia mety hahatonga antsika tsy ho afaka hanokatra na hitazona ny kaontinao sy / na hanome anao amin'ny serivisinay
Manangona dingana isika ary mitantana ny vaovao izay mamela antsika hanatanteraka ny adidintsika amin'ny fifanarahana miaraka aminao ary hifanaraka amin'ny adidintsika ara-dalàna.
Ireto ambany ireto ny tanjon'ireo fampahalalanao manokana:
Manao ny angon-drakitrao izahay mba hanomezany anao ny serivisinay sy ny vokatrao, ary mba hahafahanao hamita ny fepetra noraisinay mba hahafahanao miditra amin'ny fifandraisana mifandraika amin'ny mpanjifanay. Mba hamenoana ny mpanjifanay amin'ny fandefasana dia mila manamarina ny maha-izy anareo izahay, manatanteraka ny fahamendrehan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny adidy ara-dalàna, ary mila mampiasa ny antsipiriany hahazoam-bola handaminana ny kaonty ara-barotra amin'ny FXCC.
Maro ireo adidy ara-dalàna apetraky ny lalàna manan-danja izay andoavantsika, ary koa ny fepetra takian'ny lalàna, toy ny lalàna fanadiovana vola, lalàna ara-bola, lalànan'ny orinasa, lalàna momba ny tsiambaratelo sy lalàna momba ny hetra. Ankoatr'izany dia misy manam-pahefana manara-maso ny lalàna izay mihatra amintsika ny lalàna sy ny fitsipika, izay manery ny hikarakarana manokana ny asa fanaraha-maso momba ny karatra, ny fanodinana ny vola, ny fanamarinana ny maha-olona ary ny fanarahana ny didim-pitsarana.
Ny FXCC dia mandrindra ny angon-drakitra manokana mba ahafahana miaro ny tombontsoa ara-drariny nokasaintsika na ny antoko fahatelo, izay ny tombotsoa ara-drariny raha manana antony ara-barotra na ara-barotra hampiasana ny vaovao. Na izany aza, tsy tokony handiso fananarana anao sy izay tsara indrindra aminao izy io. Ireto misy ohatra:
Manomboka ny fizotry ny fitsarana ary manomana ny fiarovantsika amin'ny fomba fitsaràna;
midika sy dingana arahintsika mba hikarakarana ny IT sy ny fiarovana ny orinasa, ny fisorohana ny heloka bevava, ny fiantohana amin'ny fiarovana, ny fidirana an-tserasera ary ny fepetra manohitra ny fanamelohana;
fepetra hitantanana ny raharaham-barotra ary hamokarana vokatra sy serivisy fanampiny;
fitantanana ny risika.
Azo atao ny mandefa ny angon-drakitrao manokana amin'ny raharaham-barotra anatiny sy ny tanjon'ny fitiliana, izay ao anatin'ny tombontsoa ara-drariny ary takiana mba hanatanterahana ny adidintsika ara-dalàna. Isika ihany koa dia mitazona firaketana mba hahazoana antoka fa manaiky ny adidinareo amin'ny fifanekena mifanaraka amin'ny fifanarahana mifehy ny fifandraisanareo aminareo.
Indraindray, ny lalàna dia mitaky antsika hanoro hevitra anao momba ny fiovana sasany amin'ny vokatra sy / na ny asa na ny lalàna. Azontsika atao ny mampahalala anareo ny fiovana mifandraika amin'ny vokatra sy ny serivisy, noho izany dia voatery handamina ny mombamomba anao manokana ianao mba handefa anao ny fampandrenesana ara-dalàna. Hanohy hahazo ity vaovao ity ianao na dia tsy misafidy ny hahazo fampahalalana mivantana avy amintsika aza izahay.
Azontsika atao ny mampiasa ny angon-drakitrao momba ny tanjona fikarohana sy fandalinana, ary ny tantaran'ny varotrao mba hanafahana fandalinana, tatitra, fanentanana izay mety hahaliana anao amin'ny adiresy mailaka nomena anao. Mariho fa ianao dia manana zo hanova ny safidinao foana raha toa ka tsy te-hahazo ny fifandraisana toy izany intsony ianao.
Raha tsy tianao ny hampiasa ny fampahalalana manokana ataonareo amin'ny fomba toy izany, alefaso azafady amin'ny mailaka support@fxcc.com mangataka ny tsy hiditra amin'ny tanjona marketing. Raha mpizara an-tserasera ianao, dia azonao atao ny miditra ao aminao Trader user Trader Hub ary hanova ny fepetra fanamarinanao amin'ny fotoana rehetra.
Azontsika ampiasaina ny fampahalalana manokana omenao mba hahazoana antoka ny fenitra ambony indrindra amin'ny fanomezana ny vokatra sy ny serivisy.
Ny tanjona fototra ampiasainay ny mombamomba anao manokana dia ny mamela antsika hahatakatra ireo tanjona ara-bola ataonareo ary hiantohana fa ny tolotra sahaza dia mifanaraka amin'ny mombamomba anao. Ankoatra izany, ity fampahalalana ity dia manampy ny FXCC hanome tolotra kalitao. Na dia mety handefa anao fitaovam-pambolena ara-barotra (anisan'izany ny SMS na mailaka fampitam-baovao ho anao hijerena na handefa marika, na fampahalalana hafa) indraindray izay heverinay fa hilaina aminao, ny fiainanao manokana. Raha tsy misy vaovao fantatrao, ny fampahalalana manokana ataonay dia ampiasaina amin'ny fametrahana sy ny fitantanana ny kaontinao, ny famerenana ny filànao mitohy, ny fanamafisana ny serivisy mpanjifa sy ny vokatra ary ny fanomezana anao ny fampahalalana maharitra na ny fotoana ahafahantsika mino fa mety aminao.
Tsy hampahafantatra ny mombamomba anao manokana ny FXCC raha tsy misy ny fanekenao mialoha, na izany aza, arakaraka ny vokatra na ny serivisy voakasik'izany sy ny fameperana manokana amin'ny fampahalalana mafonja, midika izany fa azo ambara ny fampahalalana manokana:
Mpanome tolotra serivisy sy mpanolo-tsaina momba ny serivisy ho an'ny FXCC izay nanao fifanarahana mba hanomezana anay ny fitantanana ara-panjakana, ara-bola, fiantohana, fikarohana na asa hafa.
Fampahafantarana mpikarakara na mpiara-miasa izay manana fifandraisana ifanaovana isika (izay misy ao anatiny na ivelan'ny faritra ara-toekarena Eoropeana)
Mpandraharaha, fitsarana, tribunaly ary manam-pahefana ara-dalàna izay nanaiky na nahazo alalana tamin'ny lalàna
Tatitra momba ny kaonty any amin'ny banky na sampan-draharaham-pizahan-telefaona, mpanome tolotra fanamarinana fahatelo, fisorohana ny hosoka, tolo-dalàna fanadiovana vola, famantarana na fanaraha-maso an-tsitrapo ny mpanjifa
Izay rehetra nahazo alalana avy amin'ny olona iray, araka izay voafaritry ny olona na ilay fifanarahana
Ho an'ny Affiliate an'ny orinasa na orinasa hafa ao amin'ny orinasa vondrona iray ihany.
Raha toa ka asaina araka ny lalàna na fahefana tompon'andraikitra toy izany ny famoahana izany, dia atao amin'ny FXCC ny manatanteraka ny adidy ara-dalàna, miaro ny tenany amin'ny hosoka mety, ary manohana ny fifanarahana amin'ny serivisy. Raha toa ka ilaina izany fampahafantarana izany dia hatao amin'ny fototra "ilaina", raha tsy misy torolàlana nomen'ny manam-pahefana. Amin'ny ankapobeny dia takianay fa ireo fikambanana tsy amin'ny FXCC izay miandraikitra na mahazo ny mombamomba ny tsirairay amin'ny fikarakarana ny serivisy amin'ny FXCC dia manaiky ny tsiambaranton'ity vaovao ity, dia manaja ny zon'ny tsirairay amin'ny fiainana manokana ary manaraka ny toro-làlana momba ny fiarovana sy ny politika.
Amin'ny toe-javatra sasany dia mety hanome fampahalalana ho an'ny antoko fahatelo isika raha toa ka takiana ara-dalàna ny hanao izany na raha omena alalana isika eo amin'ny fepetra takian'ny fifanekena mifandraika amin'izany na raha nomena ny fanekenareo.
Azontsika atao ihany koa ny mampahafantatra ny mombamomba anao manokana amin'ny antoko fahatelo raha toa ka adidintsika ny mamoaka na mizara ny angon-drakitra manokana mba hanatanterahana ny adidy ara-dalàna, na hampihatra na hampihatra ny adiresintsika sy ny fepetra momba ny Site.
Amin'ny fandefasana ny mombamomba anao dia manaiky ny fampiasana ny FXCC momba izany vaovao izany ianao, araka ny voalazan'ity politika ity. Amin'ny fahazoana sy fampiasana izany dia manaiky ianao fa efa namaky, nahatakatra ary nifanaraka tamin'ity politika manokana ity. Miaro ny zony hanova ny politikantsika manokana isika indraindray ary hanavao ity pejy ity mifanaraka amin'izany. Azafady avereno jerena araka ny tokony ho izy ny politikantsika - ny fampiasanao ny tranokala dia hanamarina fa manaiky izany fiovana izany ianao.
Ny tranonkala dia mety misy, indraindray, misy rohy mankany amin'ny tranokala avy amin'ny tambajotran'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-miasa. Raha manaraka rohy mankany amin'ireny tranonkala ireny ianao, mariho fa afaka manana ny politikan'ny fiainany manokana ireo tranonkala ireo ary tsy manaiky andraikitra na andraikitra amin'ny politika. Azafady azafady ireo fitsipika ireo alohan'ny hametrahana ireo angona manokana amin'ny tranonkala.
Azonao atao ny manala ny fanekenao amin'ny fotoana rehetra, na izany aza dia tsy hisy fiantraikany ny fanodinana ny mombamomba ny mombamomba azy alohan'ny handraisanao ny famoahana azy.
Ny FXCC dia hitazona ny angon-drakitrao manokana ho anao raha toa ka manana fifandraisana ara-barotra miaraka aminao ianao.
Amin'ny alàlan'ny lalàna dia takiana isika hamaly ny fangatahana angona manokana ao anatin'ny 30 andro, raha toa ka tsy mitaky fotoana bebe kokoa hanaovana fanadihadiana sy fanombanana ny karazana fangatahana. Ireo zo mety ho azonao amin'ny fifandraisanao amin'ny fampahalalana manokana momba anay dia nofaritana etsy ambany:
Hahazo ny fidirana manokana amin'ny mombamomba anao. Izany dia ahafahanao mahazo dika amin'ny tahiry manokana hitanay momba anao.
Mangataha fanitsiana / fanitsiana ny angona manokana omenao anao. Izany dia ahafahanao manitsy ny angon-tsoratra tsy feno na tsy marina izay hitanay momba anao. Azontsika atao ny mangataka fanazavana fanampiny sy antontan-kevitra ilaina mba hanamarinana ny filàna ny fangatahana angon-drakitra nangatahana.
Mangataha ny mombamomba anao manokana. Azonao atao ny mangataka antsika hamafa ny angon-drakitrao manokana, mampihatra ny zonao "hohadinoina", izay tsy misy antony tokony hanohizantsika azy. Ny fangatahana hanafoana ny mombamomba anao dia hitondra ny fanakatonana ny kaontinao sy ny famaranana ny fifandraisana eo amin'ny mpanjifa.
Mangataha ny 'fanakanana' na manafoana ny fanodikodinanao ny angona manokana amin'ny toe-javatra sasany, toy ny hoe manohitra ny fahamarinan'ny fampahalalam-baovao na zavatra ataonao amin'ny fanitsiana azy. Tsy hanakana antsika tsy hamerina ny mombamomba anao manokana izany. Hamarino anao izahay alohan'ny hanapahanay ny tsy hanaiky ny fangatahana nangatahana. Raha efa nanambara ny mombamomba ny tenanao manokana ho an'ny hafa isika, dia hampahafantatra ny fameperana raha azo atao. Raha manontany anay ianao, raha azo atao ary ara-dalàna izany, dia hilaza aminareo izay nizara ny mombamomba anao manokana mba hahafahanao mifandray mivantana aminy.
Manan-jo hanimba ny angon-drakitra manokana ataonao ho an'ny tanjona mivantana mivantana. Tafiditra ao anatin'izany ny famolavolana ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fivarotana mivantana. Raha toa ianao manohitra ny fanitsiana ny tanjona mivantana amin'ny tolotra, dia hampitsahatra ny fanitsiana ny angon-drakitrao manokana ho an'ireny tanjona ireny ianao.
Ny tanjona, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay azontsika raisina izay mifototra amin'ny fanodinana otrikaina (tafiditra amin'izany ny profiling). Ny profiling dia midika fa ny fampiasana teknôlôjia izay manampy antsika handray fanapahan-kevitra haingana, mifototra amin'ny angona manokana izay angoninay avy aminao na avy amin'ny antoko fahatelo.
Tsy voatery handoa saram-pandraharahana ianao mba hahazoana ny angona manokana (na hampihatra ny zon'ny hafa). Na izany aza dia azontsika atao ny mandoa saram-pitsaboana mety, raha toa ka tsy mazava, miverimberina na be loatra ny fangatahanareo. Azonao atao ihany koa ny mandà tsy hanaiky ny fangatahanao amin'ireo toe-javatra ireo.
Miezaka mamaly ny fangatahana ara-drariny izahay ao anatin'ny iray volana. Indraindray dia mety haharitra ela kokoa mihoatra ny iray volana raha toa ny fangatahanao dia tena sarotra na efa nanao fangatahana maromaro. Amin'ity tranga ity dia hampahafantarinao sy hampandehananao hatrany ianao.
Miezaka izahay hiantoka ny fiarovana ny vaovao atolotra anay, na mandritra ny fifindrana ary rehefa mahazo izany izahay. Manara-maso ny fiarovana ara-panjakana, ara-teknika ary ara-batana izahay mba hiarovana ny Antontam-baovao momba ny famotehana tsy misy herisetra na tsy ara-dalàna, ny fahavoazana tsy fantatra, ny fanovana tsy nahazoana alalana, ny fampahalalana tsy nahazoana alalana na ny fidirana, ny fampiasana tsy ara-dalàna, ary ny endrika hafa tsy ara-dalàna amin'ny fanitsiana ny Data Personal amin'ny fananantsika. Izany dia ahitana, ohatra, firewalls, fiarovana ny tenimiafina ary ny fidirana amin'ny fidirana sy ny fanamarinana hafa.
Na izany aza, tsy misy fomba fiasa amin'ny Internet, na fomba fitehirizana elektronika, 100% azo antoka. Isika dia tsy afaka manome antoka na manome toky ny fiarovana ny fampahalalana rehetra omena antsika ary manao izany amin'ny risika manokana. Tsy afaka manome toky koa isika fa ny fampahalalana toy izany dia mety tsy azo atokisana, ambaratonga, na fanovana, na rava noho ny fanapahan-kevitry ny fiarovana ara-batana, ara-teknika na ara-pitantanana. Raha inoanao fa nampihetsi-po anao ny mombamomba anao manokana, azafady mba mifandraisa aminay.
Ny FXCC dia afaka mitahiry ny fampahalalana ao amin'ny tahadikany ho an'ny famerenana ny valin'ny fangatahana na famaha olana, manome tolotra vaovao sy vaovao ary hihaona ny fepetra takian'ny lalàna momba ny angona. Midika izany fa mety hitazona ny mombamomba anao ianao rehefa mitsahatra ny mampiasa ny Site na ny serivisinay na ny fifandraisanao aminay.
Cookies dia lahatsoratra kely voatahiry ao amin'ny ordinateranao mba hanampy antsika hamantatra ny karazana tranokala sy ny fitaovana ampiasainao, izay toerana nipetrahanao tao amin'ny tranokala, rehefa miverina ao amin'ny tranokala ianao, ary avy eo ianao mba hiantohana ny fampahalalana anao tsy manana ahiahy. Ny tanjon'ity fampahalalana ity dia ny hanomezananao traikefa kokoa sy mahomby amin'ny tranonkala FXCC, anisan'izany ny fanolorana tranonkala mifanaraka amin'ny filànao na ny safidinao.
Ny FXCC dia mety hampiasa mpandraharaha mahaleotena avy any ivelany ihany koa hanaraha-maso ny fifamoivoizana sy ny fampiasana ao amin'ny tranokala. Ny cookies dia matetika ampiasaina amin'ny tranonkala maro ao amin'ny Internet ary afaka misafidy raha ary ny fomba amam-panao ny cookie amin'ny fanovana ny safidinao sy ny safidy ao amin'ny browser. Mety tsy afaka miditra amin'ny faritra sasany ianao www.fxcc.com raha misafidy ny hanaisotra ny fanekena cookie ao amin'ny navigateur ianao, indrindra indrindra ireo ampahany azo antoka ao amin'ny tranonkala. Noho izany dia manoro hevitra anao izahay hanaiky ny fanekena cookie mba handray soa avy amin'ny serivisy rehetra ao amin'ny tranonkala.
Manan-jo hanapa-kevitra ianao raha hanaiky na hanaiky cookies amin'ny fametrahana na fanitsiana ny fanaraha-maso ny tranonkalanao mba hanaiky na handà cookies. Raha misafidy ny hanaiky cookies ianao, dia mety mbola mampiasa ny tranokalantsika ihany na dia mety ho voafetra aza ny fahafahanao miditra amin'ny sehatra sasany sy ny faritra ao amin'ny tranonkalanay. Raha ny fomba ahafahanao mandà cookies amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny tranonkalanao dia tsy mitovy amin'ny browser-to-browser ianao, tokony hitsidika ny fitaovan'ny tranonkalanao ianao mba hahazoana vaovao fanampiny.
Raha mbola mampiasa an'ity tranonkala ity foana ianao raha tsy manova ny fikirakirana cookie amin'ny tranokala Internet anao, dia manaiky ny politikan'ny cookie ianao
Raha te hianatra bebe kokoa momba ny cookies sy ny fomba fitantanana azy amin'ny alalan'ny navigateur / fitaovana azafady mba tsidiho www.aboutcookies.org
Raha te-hifandray aminay amin'ny fanontanina na fanehoan-kevitra momba ny politikan'ny fiainanao manokana ianao, dia miangavy anao malalaka ny hifandray aminay amin'ny alàlan'ny e-mail, adiresy postal, telefaona ary fax na mampiasa ny tranokala chatterana ho an'ny solontenan'ny mpanjifa IM.
Mpandraharaha Lalàna, Lalana Kumul,